AL-SHABAAB: Cid kasta oo ka qayb-qaadatay ansixinta Dastuurku Dil bay noogu Xukuman yihiin”
Soomaaliya ay ugu xukuman yihiin dil toogasho ah, iyada oo taas sabab uga dhigtay inay meel-mariyeen dastuur ay sheegeen inuu diinta Islaamka ka soo horjeedo.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ee Al-Shabaab, Sheekh Maxamed Xasan Cumar (Abu Cabdiraxmaan) oo la hadlayay warbaahin ku hadasha afka Al-Shabaab ayaa ku dhawaaqay inay meel walba ku beegsan doonaan cid kasta oo gacan ka geysatay dastuurka KMG ah ee shalay la ansixiyay.
“Cid walba oo ka qaybqaadatay ansixinta dastuurka waxaan caddeynaynaa inay dil noogu xukuman tahay meel walba oo ay joogaanna aan ku beegsan doonno,” ayuu yidhi Sheekh Abu Cabdiraxmaan oo intaas ku daray in dastuurka la ansixiyay uu yahay mid lagaga horjeedo diinta Islaamka.
Ergooyinkii ansixinta dastuurka ayaa shalay oo Arbaca ahayd waxay cod aqlabiyad ah ku ansixiyeen dastuurka, iyada oo maamullada dalka ka jira ay soo dhaweeyeen ansixinta dastuurka, madaxda dowladda KMG ahina ay sheegeen in Somalia ay hadda yeelatay dastuur.
Dhinaca kale, afhayeenka hawlgallada ee Xarakada Al-Shabaab, Sheekh Cabdicasiis Abu Muscab ayaa sheegay inay iyagu mas’uul ka ahaayeen weerarradii ismiidaaminta ahaa ee shalay lagu weeraray xarunta uu ka socday shirka ansixinta dastuurka, wuxuuna xusay in weerarradaas ay fuliyeen laba xubnood oo iyaga ka tirsan.
Ugu dambeyn, Sheekh Abu Muscab wuxuu sheegay in weerarkaas ay ku dileen askar ka tirsan ciidamada dowladda KMG ah, bal se mas’uuliyiinta dowladda ayaa sheegay inay weerarkaas ka hor tageen oo aanu wax khasaare ah u geysan.